RAHARAHA IOMBONAN’NY REHETRA NY FANANAN-TANY
UTILISER LA TECHNOLOGIE AUDIO POUR DIFFUSER LES CONNAISSANCES
Fihaonam-be « Fampivoarana ny tontolo iainana »
NY MAHA-FIROHOTAN’NY MPIASA KRISTIANINA NY IRAY AINA
ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY FANASANA TÀNANA AMIN’NY RANO SY SAVONY
Fampandrosoana tsara paika LAHARAM-PAHAMEHANA NY FAMOKARANA
Fampiofanana ny tekinika fanoritana tsipimiraabo sy fampivadiam-boly
ANDRIAMIHANTA Rina Sitraka Rabeharisoa Tompon’andraikitra ara-tekinika ao amin’ny tetikasa FANILO-DIAKONIA
Ilaina ny fanaovana jery todika ny zava-bita hahafahana mitsinjo ny hoavy raha ny misy natrehin’ny fikambanana BIMTT sy ny mpiara-miombon’antoka aminy no asian-dresaka. Tsy niala tamin’ny foto-kevitra nijoroany ny mpiara-dia amin’ny BIMTT dia ny fanandratana ny tontolo ambanivohitra. Miseho amina endrika samihafa ny ivon’ny dingana vita sy ny andrandraina ho tanterahina amin’ny hoavy. Nomen-danja manokana ny fifehezana ny tontolon’ny serasera. Satria miantoka ny fifandraisana marihitra sy ny fampitam-baovao amin’ny olon-drehetra fa indrindra ny tansaha mpamokatra ny votoatin’ny herin’ny fahaizana misera. Raisina ohatra amin’izany ny fanomezana aina vao ny vondrona serasera. Antony manokana ny fahazoana atontan-kevitra sy vaovao isam-paritra. Mandringa manko ny antom-pisian’ny akoram-baovao aely ao amin’ny gazetim-pifandraisana Tantely raha tsy eo ny mpiara-miasa manerana ny Nosy mameno sy mampahafantatra ny rehetra ny misy isam-paritra sy ny isan-toerana any aminy.
Nasiana tsindrim-peo manokana ihany koa ny lahasa miorina amin’ny Andrimaso misahana ny resaka fananan-tany. Tsiahivina fa isan’ny tetikasa lehibe ikatrohan’ny BIMTT sy ny mpiara-dia aminy io sehatr’asa io. Azo itsilovana an’izany ny atrikasa isan-tokony. Manginy fotsiny ny fivoriam-be niarahana tamin’ny mpiara-miombon’antoka mitovy fijery sy ny fanjakana. Teo ihany koa ny tetikady nenti-nisarika sy ny hetsika fiarovana nataon’ny mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny fananan-tany mba handresena lahatra ny fanjakana sy ny iraisam-pirenena eo amin’ny fiarovana ny zon’ny malagasy tompon-tany. Izany indrindra no nirosoana tamin’ny fampahafantarana ny saritany mivohitra mba hampahalalana bebe kokoa ny zava-misy amina toerana na faritra iray. Noresahina ihany koa ny mahakasika ny tontolo iainana sy ny fiarovana azy. Ka navohitra tamin’ny hetsika nataon’ny BUCAS ny fanandratana ny hasin’ny zava-boary sy ny tontolo manodidina azy mba hokajina lalan-dava. Tolo-kevitra sy vahaolana nisongadina tamin’izany ny fanamafisana ny fampiasana ny angovo azo havaozina hanalefahana ny tsindry ataon’ny olona sasany amin’ny fandripahana ny ala eto Madagasikara. Niara-niombom-peo ny rehetra amin’ny fiaraha-mientana ho amin’ny tombontsoan’ny tontolo iainana malagasy. Tsy mitoka-monina koa ny BIMTT fa misokatra amin’ny hafa. Toa ny FORMAPROD, GSDM, CCRF...sns. Isany mpiray antoka miara-misalahy amin’ny BIMTT eo amin’ny fanomezan-danja ny fampandrosoana maharitra ny tontolo ambanivohitra.
Eo ihany koa, ny fiaraha-miasa amin’ny ray aman-dreny ara-bakodrazana sy ny tantsaha eny ifotony. Azo itarafana amin’izany ny tetikasa ataon’ny AFAAF Manakara. Toraka izany koa, ny fanandratana ny lahasa jono sy ny anjara asan’ny vehivavy eo amin’ny velon-tena araka ny ahitana azy ao amin’ny ivon-toerana Md Benoît Fenoarivo atsinanana. Iadiana ny fanomezana zo aman-kasina ny vehivavy eo amin’ny fananan-tany satria fototry ny aina sy ny fampandrosoana ny reny.
Eto am-pamaranana dia tsiahivina ny fandalovan’ny solontenan’ny MISEREOR teto Madagasikara. Iaraha-mahalala fa io mpiara-miombon’antoka io no isan’ny kitro ifaharan’ny fampandehanan-draharaha sy fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara. Nanamarika ny diany ny tafa sy dinika sy ny tomban’ezaka niaraha-nanao tamin’ny ivon-toerana maro samihafa miara-miasa akaiky aminy manerana ny Nosy.